२०७८ असार २४ गते बिहिवार
२४ असार, काठमाडौं । सरकारले अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । गत २० असारदेखि सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो गराएसँगै संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको हो । संक्रमण बढेसँगै तेस्रो लहर आउन सक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १ असारदेखि बुधबारसम्म २ लाख ७० हजार ४ सय ८९ जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा ५९ हजार १ सय ७७ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा संक्रमणको अवस्था २१ दशमलव ८७ प्रतिशत हुन आउँछ ।
२० असारयता बुधबारसम्म ४४ हजार १ सय १ सय ४२ जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा ९ हजार ८ सय ३८ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यसरी हेर्दा २२ दशमलव २८ प्रतिशत संक्रमणदर रहेको हुन आउँछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १ असारदेखि २३ असारसम्म १ लाख ६७ हजार २ सय ७८ जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्दा ३९ हजार ७ सय ७३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यस्तै, सोही अवधिमा १ लाख ३ हजार २ सय ११ जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १९ हजार ४ सय चार जनामा पोजेटिभ देखिएको छ ।
भौतिक दूरी कायम नहुँदा र आवतजावतका क्रममा मास्कको समुचित प्रयोगमा ध्यान नदिँदा पनि जोखिम बढेको जनस्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले संक्रमितको संख्यामा कमी देखिए पनि जोखिम यथावत् रहेको बताए । उनले भने, ‘संक्रमणको जोखिम टरेको छैन । जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरौं ।’
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन संक्रमणबाट जोगिन मास्कको समुचित प्रयोग, व्यक्तिगत सरसफाइ र भौतिक दूरी कायम नै अचुक उपाय रहेको बताउँछन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
प्रदेश १ मा २५ सङ्क्रमित थपिए
पोखरामा पर्खालले च्यापिएर युवकको मृत्यु
सबै नेपालीले खोप नपाउन्जेल अभियान बन्द हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
घाटा न्यूनीकरणमा आयल निगमलाई चुनौती, अझै पाक्षिक ८० करोड नोक्सानी
भारतको उत्तराखण्डमा हिमनदी विस्फोटले क्षति पुर्‍याएकोमा राष्ट्रपतिद्वारा दुःख व्यक्त
२०७८ मङ्सिर ३ गते शुक्रवार
कर्णालीका सबै जिल्लामा खोप अभियान शुरु
महामारी बिरुद्ध अग्रपंक्तिमा कार्यरत व्यक्तिहरुका लागि टाटा मोटर्सको बिशेष योजना
चितवनमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच सय नाघ्यो
सिप्रदीको सर्टिफाइड ग्यारेज अब मेलम्चीमा पनि
चितवनमा कोरोना संक्रमित एक महिलाको मृत्यु
२०७७ भाद्र १३ गते शनिवार
विद्युत् आयोजनाका मजदूरले पाएनन् ज्याला
अण्डाको गेट मूल्य घट्यो, उपभोक्ता मूल्यमा मनपरी
२०७७ फाल्गुन ३ गते सोमवार